P० भव्य प्रीमियम थिम वर्डप्रेसका लागि क्रिएटिव अनलाइन
G० भव्य प्रीमियम WordPress थीम्स
कार्लोस सान्चेज | | WordPress
यो स्पष्ट छ कि% 99% केसमा एक प्रीमियम विषयवस्तु एक नि: शुल्क वर्डप्रेस थीम भन्दा धेरै राम्रो छ, तर यो तार्किक पनि छ कि धेरै जसो अवस्थामा हामी त्यो पैसा बचत गर्न रुचाउँछौं र थिम आफैंमा डिजाइन गर्न वा थोरै कम आकर्षक प्रयोग गरेर, यो सबै प्रत्येक परियोजनाको महत्वाकांक्षामा निर्भर गर्दछ।
जे भए पनि, यदि तपाइँ प्रीमियम थिमहरूमा हुनुहुन्छ र तपाइँ उनीहरूलाई कति राम्ररी तयार छन् मनपर्दछजम्प गरेपछि, त्यहाँ चालीस जना भन्दा राम्रा छन् जुन गत महिनाहरूमा बाहिर आए, धेरै जसो केसहरूमा वास्तविक चमत्कार ... तर स्पष्टतया शुल्कको लागि।
स्रोत | हाम्रोटट्स
आधुनिक रियल्टर वर्डप्रेस विषयवस्तु घर जग्गा प्रकार वेबसाइटहरूका लागि डिजाइन गरिएको हो। यो तपाइँको काम वा उत्पादनहरू प्रदर्शनको लागि उपयुक्त हुन सक्छ।
1 घर जग्गा सुन
4 नयाँ एजेन्सी
12 आधुनिक व्यापार
18 सफा कट
19 यसलाई समीक्षा गर्नुहोस्
22 ud स्टुडियो
24 मेरो पोर्टफोलियो ब्लग
25 वर्ग ३
26 खानपान राम्रो होस्
28 अति उत्तम
30 भिवि थीम
33 तेर्सो ब्रान्ड बक्स
34 फोटो कला ग्यालरी
35 मेरो अनुप्रयोग थिम
घर जग्गा सुन
घर जग्गा सुनौलो WordPress थीम रियल ईस्टेट प्रकार वेबसाइटहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो। यो तपाइँको काम वा उत्पादनहरू प्रदर्शनको लागि उपयुक्त हुन सक्छ। यो आधारभूत रियल एस्टेट लिस्टिंग फिल्टरिंगमा निर्मित आएको छ, विशेष स्लाइडर ब्यानर र विषयवस्तु अनुकूलित गर्न प्रशासक विकल्पहरू।
डिजाइनर सुविधाहरू र विकल्पहरूको पूर्ण प्याक गरिएको पोर्टफोलियो / ब्लग वर्डप्रेस टेम्प्लेट हो।
Designtia WordPress विषयवस्तु तपाईंको सबै आवश्यकताहरू फिट गर्नको लागि निर्मित छ, या त तपाईं पोर्टफोलियो, कर्पोरेट वा ezine वेबसाइट चाहनुहुन्छ।
नयाँ एजेन्सी डब्ल्यूपी, एजेन्सी HTML / CSS टेम्पलेटको WordPress संस्करण हो। मूल संस्करणबाट धेरै सुधारको साथ आउँदछ र वर्डप्रेसको गतिशील पक्षहरूको उपयोग गरेर नयाँ एजेन्सी अझ बढी अनुकूलनयोग्य र तपाइँको पोर्टफोलियो, ब्लग, वा कर्पोरेट वेबसाइटको लागि सामान्य रूपमा उपयुक्त बनाउँछ।
अल्फा वर्डप्रेस थिम एक स्वच्छ, सुन्दर र सजिलो अनुकूलन विषयवस्तु हो। यो सफा हेर्ने वेबसाइटहरूको लागि उत्तम छ। यो थिम भारी र फंक्शनल विषयवस्तु पृष्ठको साथ आउँदछ जुन तपाइँको नियन्त्रण अन्तर्गत तपाइँलाई सम्पूर्ण वेबसाइट दिन्छ। यो page पृष्ठ टेम्पलेट्स, पोर्टफोलियो, ग्यालरी, ब्लग र सम्पर्कको साथ आउँदछ।
Meezio एक सरल र स्वच्छ एक पृष्ठ पोर्टफोलियो विषयवस्तु हो। यसले JQuery लाइब्रेरी र स्क्रोलहरू तेर्सो, ठाडो या दुबै प्रयोग गर्दछ। सामग्री 960 ग्रिड प्रणाली प्रयोग गरी बनाइएको हो र अनुकूलित गर्न सजिलो छ।
कोलोजियम वर्डप्रेस, रचनात्मकता र महान फ्यूचरहरूको अन्तिम फ्यूजन हो। यो प्रीमियम विषयवस्तु लगभग केहिको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, कर्पोरेट वेबसाइटहरूबाट व्यक्तिगत पोर्टफोलियोमा। यसले धेरै उन्नत CSS3 र jQuery प्रभावहरू प्रयोग गर्दछ, तैपनि यसले अझै ब्राउजरहरूमा काम गर्दछ जुन यसलाई समर्थन गर्दैन।
हाइपले सबै सँगै पाउँदछ। तपाईलाई यसमा जे चाहिन्छ। पूर्ण चौडाइ स्लाइडर, पूर्ण ढाँचाबद्ध तत्वहरू, पोर्टफोलियो, ब्लग काम गर्ने AJAX सम्पर्क फारम, स्तम्भ टेम्प्लेट पूरै धेरै।
VooSky भयानक चित्रित पोस्ट स्लाइडर, दुई घर पृष्ठ लेआउट, colors रंगहरू, पूर्ण रूपमा कार्यरत सम्पर्क फाराम, अग्रिम विषयवस्तु / पोष्ट र पृष्ठ विकल्प प्यानलहरू, पोर्टफोलियो पृष्ठ (बहु पृष्ठ वा एकल पृष्ठ), ड्रपडाउन नेविगेशन अनन्त ड्रपडाउन स्तर र अन्य धेरैको साथ आउँदछ। ..
द्रुतस्टार्ट रियल ईस्टेट WordPress थीम रियल ईस्टेट प्रकार वेबसाइटहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो। यो तपाइँको काम वा उत्पादनहरू प्रदर्शनको लागि उपयुक्त हुन सक्छ। यो आधारभूत रियल एस्टेट लिस्टिंग फिल्टरिंगमा निर्मित आएको छ, विशेष स्लाइडर ब्यानर र विषयवस्तु अनुकूलित गर्न प्रशासक विकल्पहरू।
लालित्य एक सुरुचिपूर्ण, सरल, सफा र न्यूनतम WordPress WordPress विषयवस्तु हो, पोर्टफोलियो, व्यवसाय, ब्लगहरू र व्यक्तिगत साइटहरूको लागि उपयुक्त।
आधुनिक व्यापार L लाइट वर्डप्रेस एक कस्टम लिखित प्रीमियम विषयवस्तु हो जुन कुल नयाँ डिजाइन, छविहरू र HTML बाट रूपरेखाबाट HTML संस्करण (एचटीएमएल संस्करण सबै डाउनलोडमा पूर्ण रूपमा समाहित हुन्छ धेरै अतिरिक्त एक्स्ट्रा अतिरिक्त!)। यो फोटोग्राफर, डिजाइनर वा अनुप्रयोग विक्रेताको लागि डिजाइन गरिएको हो र यसले सजिलैसँग तपाइँको कामको ग्यालरी पृष्ठहरू सिर्जना गर्दछ र प्रकाश पृष्ठभूमि बिल्कुल ठीक प्रदर्शन गर्दछ - विषयवस्तु g भव्य र color्गीन योजनाहरूको साथ आउँदछ जुन पृष्ठभूमि छविहरू मात्र होइन तर लि colors्क र buttonहरू र बटन रोलओभर र colors्गहरू पनि परिवर्तन गर्दछ बिल्कुल मिलाउनको लागि। ।
वाल बजारमा सब भन्दा लचिलो, अनुकूलनयोग्य, र प्रयोग गर्न सजिलो WordPress विषयवस्तु हो। वालको साथ, तपाईं आफ्नो ब्ल्ग, पोर्टफोलियो, र व्यवसाय चलाउन सक्नुहुनेछ यस्तो तरीकाले जुन व्यवसायिक, रमणीय, र सौन्दर्य रूपमा मनपर्दो छ।
यस शक्तिशाली थिमको साथ WordPress great.० नयाँ नयाँ सुविधाहरूको फाइदा लिनुहोस्। यो पाँच पोस्ट प्रकारको साथ, वर्डप्रेसमा सामग्री प्रकाशन गर्न सजिलो कहिल्यै भएन।
विषयवस्तुमा भिडियो सम्मिलन प्यानल छ, जसले भिडियो इन्सर्सन छिटो र सजिलो बनाउँदछ। तपाईं Vimeo भिडियो, यूट्यूब भिडियो र फ्ल्यास भिडियो (swf) सम्मिलित गर्न सक्नुहुन्छ।
विषयवस्तुमा असीमित र colorsहरू र पृष्ठभूमिहरू छन्, विषयवस्तु प्यानल मार्फत एलएल विन्यासयोग्य।
पाथफाइन्डर एक पृष्ठ र किबोर्ड नेभिगेसन संचालित वर्डप्रेस विषयवस्तु हो। यो विषयवस्तु अन्यबाट अद्वितीय छ किनकि यसमा जीवन स्ट्रिम सेक्सन छ जसले सबै हालसालका सामाजिक गतिविधिहरू (ट्विटर, डिग्ज, स्वादिष्ट, स्टम्बलअप, फेसबुक, लास्ट एफएम, फ्लिकर र टम्ब्लर) प्रदर्शन गर्दछ र सामाजिक साइटबाट प्रयोगकर्ता खाता थप्न सजिलो छ। व्यवस्थापक कस्टम प्यानलबाट लाइफ स्ट्रिम सेटिंग्समा माथि उल्लेख गरिएको छ।
पेशेवर हेर्दै, सफा डिजाइन वर्डप्रेस थिम शक्तिशाली सुविधाहरू र अनुकूलन योग्य लेआउटको साथ। ब्लग वा व्यापार वेबसाइट को लागी महान।
TRANSPARENCY थिम कसैलाई पनि एक अद्भुत वेबसाइट सिर्जना गर्ने मौका प्रदान गर्न सिर्जना गरिएको थियो, WordPress प्लेटफर्म प्रयोग गरेर। मुख्य सुविधाले विषयवस्तुको प्रत्येक तत्त्वका लागि अस्पष्टता स्तर परिवर्तन गर्न र प्रशासन प्यानल प्रयोग गरेर कुनै पनि कोटी पोष्ट वा पृष्ठका लागि बिभिन्न पृष्ठभूमिहरू थप्न विकल्प प्रदान गर्दछ।
क्लीनकट एक वर्डप्रेस थिम हो जुन सबै अद्भुत नयाँ WordPress3सुविधाहरूको साथ फाइदा लिन्छ र पोर्टफोलियो र व्यापार वेबसाइटहरूको लागि उत्तम उपयुक्त हो। यो fant शानदार छवि र समाचार स्लाइडशोको साथ आउँदछ जुन भिडियोलाई पनि समर्थन गर्दछ, बहु पृष्ठ टेम्पलेट्स छ, धेरै अनौंठो पोर्टफोलियो छँटाउने विकल्प र पक्कै पनि तपाईंलाई F कल्पित स्किन्सबाट छनौट गर्ने सम्भावना दिन्छ।
यसलाई समीक्षा गर्नुहोस्
समीक्षा यसले एक शक्तिशाली समीक्षा र सामुदायिक विषयवस्तु प्रदान गर्दछ नयाँ वर्डप्रेस features.० सुविधाहरू प्रयोग गरेर अनुकूलन पोष्ट प्रकारहरू, ब्रान्ड नयाँ नेभिगेसन र पृष्ठभूमि प्रणालीहरू, साथै उत्कृष्ट Nivo स्लाइडर र jQuery लाइटबक्समा युट्यूब र फ्ल्यास भिडियोहरू खेल्ने क्षमतासहित। यो पनि १००% बडीप्रेस उपयुक्त छ!
युरोपा नवीनता, सरलता, भव्यता र कार्यको विवादास्पद आवश्यकताहरू बीच एक उत्कृष्ट सम्झौता हो; कर्पोरेट व्यवसायबाट पोर्टफोलियो साइटमा कुनै कुराको प्रचार गर्न डिजाइन गरिएको।
यो एक प्रीमियम वेब विषयवस्तु हो जुन विशेष रूपमा फोटोग्राफर, डिजाइनरहरू, चलचित्रकारहरू, व्यवसायहरू, कर्पोरेट घटनाहरू, र सबै रचनात्मकहरूको लागि एक चालाक साइट लेआउटमा उनीहरूको काम प्रदर्शन गर्न डिजाइन गरिएको हो। आकांक्षा मनमा केवल आधारभूत वेबसाइट टेम्प्लेट भन्दा बढि डिजाइन गरिएको छ।
@studio एक प्रीमियम WordPress विषयवस्तु हो जुन तपाईंलाई तपाईंको कथा भन्न मद्दतको लागि डिजाइन गरिएको हो। बहु गृहपृष्ठ लेआउट विकल्पहरू र स्लाइडर भेरियन्टहरूले चार र color्ग योजनाहरू र एक बुद्धिमान जाभास्क्रिप्ट कार्यान्वयनको पूरक गर्दछ। परिणाम? तपाईंको सन्देशको लागि एक शक्तिशाली प्लेटफर्म।
मजबुत एक प्रीमियम WordPress विषयवस्तु हो जुन कुनै पनि प्रोजेक्टलाई सूट गर्दछ जुन तपाईं नयाँ दृश्य र सफा डिजाइनको लागि धन्यवाद सम्झन सक्नुहुन्छ। विषयवस्तु color र color्ग छालाको साथ आउँदछ जुन तपाईंको कुनै पनि साइट आगन्तुकहरूलाई प्रभाव पार्ने कुरामा निश्चित छ र तपाईंको कम्पनीको आवश्यकताको लागि सूट गर्नेछ।
मेरो पोर्टफोलियो ब्लग
BlinkWP ले एक निजी पोर्टफोलियो र (त्यस्तो होइन) व्यक्तिगत ब्लगको सुविधा दिन्छ। एक अद्वितीय डिजाइन र प्रकार्यको साथ निर्मित, blinkWP सम्पादन गर्न र यसलाई तपाईंको आफ्नै बनाउनको लागि सजिलो छ।
SQUARED3 एक वर्डप्रेस विषयवस्तु व्यवसाय र पोर्टफोलियो साइटहरूको लागि उत्तम उपयुक्त हो। यो विषयवस्तु अत्यन्त लचिलो छ र अत्यन्त शक्तिशाली SQUARED3 अनुकूलन प्यानलबाट सुसज्जित छ। केवल एक अर्को WordPress विषयवस्तु हैन, तर पूर्ण CMS समाधान।
खानपान राम्रो होस्
यसको शीर्षमा एक जटिल र अनुकूलनयोग्य डब्ल्यूपी फ्रेमवर्कको साथ उही सुन्दर विषयवस्तु। बेजोड, विशाल ब्याक एन्ड सीएमएसलाई अलग राख्दै, यसले तपाईंलाई तपाईंको आवश्यकताको लागि परिवर्तन गर्ने लगभग अन्तहीन सम्भावनाहरू दिन्छ कि हामीले थिम फरेस्टमा कोही पनि हालसम्म गरेको छैन: एक क्लिक स्वत: स्थापना।
यस विषयवस्तुको न्यानो काठको शैलीले तपाइँको ग्राहक र साथीहरूलाई प्रभाव पार्छ। दुई पटक नसोच्नुहोस्, यदि तपाईं डिजाइन स्टुडियो वा स्वतन्त्रकर्ताको मालिक हुनुहुन्छ भने, तब यो वर्डप्रेस विषयवस्तु तपाईंको लागि उपयुक्त छ। मुख्य पृष्ठमा स्लाइड शो तपाईंको कामको उत्कृष्ट उदाहरणहरू देखाउँदछ, र सुविधाजनक पोर्टफोलियो छवि र भिडियो पोष्ट गर्न सजिलो बनाउँदछ। ड्रप-डाउन मेनू, ट्विटर काउन्टर, फ्लिकर ग्यालेरी र पूर्ण विजेट तयार हुने जस्ता धेरै सुविधाहरू तपाईंलाई यस विषयवस्तु मनपर्दछ!
अद्भुत एक शक्तिशाली पेशेवर WordPress विषयवस्तु हो। यो प्रशासक ईन्टरफेस को माध्यम बाट २ फरक प्रभावको साथ एक प्रभावशाली पूर्ण रूपले अनुकूलन योग्य jQuery होमपेज स्लाइडरको साथ आउँदछ।
तपाईंको वर्डप्रेस प्रो हो वा केवल एक शुरुआत, यो विषयवस्तु पूर्ण रूपमा कभर गरिएको छ। अद्भुत एक विशाल र शक्तिशाली ब्याकएन्ड क्षेत्र छ तपाइँसँग तपाइँको विषयवस्तुको लुक र शैलीमा पूर्ण SYSPANEL नियन्त्रण छ। होमपेजमा नम्बर ब्लग पोष्ट प्रदर्शन गर्नुहोस्, होमपेज स्लाइडर सेटिंग गति र प्रभावहरू समायोजित गर्नुहोस्, नेभिगेसनका लागि उपलब्ध फंक्शन सक्षम / असक्षम गर्नुहोस् र अधिक, सबै एक कोडको एक लाइन छुने बिना नै!
सरलता एक धेरै स्वच्छ र आधुनिक WordPress टेम्पलेट हो जुन कुनै पनि ब्रान्ड वा ब्यापार फिट गर्न अत्यधिक अनुकूलन योग्य छ।
भिविनी अन्तर्क्रियात्मक यो एक सफा र रमणीय विषयवस्तु हो, ब्यापारहरूको विस्तृत श्रृंखलाको लागि विकसित गरिएको हो। योसँग एक आक्रामक, अद्वितीय, उच्च दृश्य प्रभाव लेआउट छ, ठूलो छायाहरूमा पूरक ठूला तत्वहरूमा आधारित। Different बिभिन्न शैलीहरूका साथ आउँदछ, ती मध्ये अधिकांश कडा र colorsहरू र १ pages फरक पृष्ठहरू मिलेर बनेको छ।
इकोज प्रीमियम विषयवस्तु वर्डप्रेसको लागि पोर्टफोलियो वा व्यापार वेबसाइटहरूको द्रुत विकासको लागि डिजाइन गरिएको हो।
Feat फिचर गरिएको मुख्यपृष्ठ शैलीहरू, Port पोर्टफोलियो पृष्ठ शैलीहरू, १ Short सर्टकडहरू, कार्य पृष्ठ सम्पर्क अजाक्स मान्य टेम्पलेट र अधिक।
जेनोवा एक सामग्री केन्द्रित डिजाइन टेम्पलेट हो। यसले सबै माध्यमिक जानकारी (विजेट्स) लुकाउँदछ तर तिनीहरूलाई मागमा देखाउँदछ (माउस ओभर वा ट्याब jQuery प्रयोग गरेर टच स्क्रिनमा)।
टेम्प्लेटमा आधारित रहेर डिजाइन सिद्धान्त कम हो। त्यो विचारको साथ यो सबै भन्दा कम एक भयो तर एकै साथ यस स्टोरमा राम्रोसँग सुसज्जित वर्डप्रेस थिमहरू। यो दुबैको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ, एक फोटो, भिडियो वा सिर्फ एक डिजाइन केंद्रित ब्लगका साथै उत्पादनहरूका लागि शोकेस वा कम्पनीको लागि कर्पोरेट डिजाइन पृष्ठ।
तेर्सो ब्रान्ड बक्स
जब हामी एक-पृष्ठ वेबसाइट भन्छौं, हामी एक पृष्ठ ब्लग मतलब। तपाइँ कहिँ पनि एकल रीडायरेक्ट प्राप्त गर्नुहुने छैन। विषयवस्तुको लागि यस विषयको लागि पूर्ण कार्यात्मक गहिरो लि system्क प्रणाली रहेको छ। एक जटिल फ्लोटिंग, jquery संचालित लेआउट खुल्ला छ। तपाईको ब्राउजर विन्डोलाई पुन: आकार दिनुहोस्। यसको लक्ष्य xx% हेडर, xx% सामग्री अनुपात राख्नु हो। प्लस दायाँ पट्टि देखिने अर्को भाग।
फोटो कला ग्यालरी
यसको शीर्षमा एक जटिल र अनुकूलनयोग्य डब्ल्यूपी फ्रेमवर्कको साथ उही सुन्दर विषयवस्तु। तपाईंलाई थाहा छ कि अहिले हामीले हाम्रो लोकप्रिय एक क्लिक स्वत: स्थापना सुविधा थपेका छौं।
पछाडि बस्नुहोस्, आराम गर्नुहोस्, तपाईंको कफी प्यानुहोस्, र हाम्रो वर्क फ्रेमले यसको जादू कसरी गर्छ र हेर्नुहोस्, लाइभ पूर्वावलोकनमा तपाईंले देख्नुहुने संस्करणमा आर्ट ग्यालरी डब्ल्यूपी विषयवस्तु स्थापना गर्दछ। यस विषयवस्तुलाई php .5.0.० आवश्यक छ।
मेरो अनुप्रयोग थिम
मोबाइल एप्लिकेसनको लोकप्रियता बढ्दै जाँदा, अधिक र अधिक व्यक्तिहरू उनीहरूको सफ्टवेयरको लागि अनलाइन घर सिर्जना गर्न सजिलो तरीका खोजिरहेका छन्। My अनुप्रयोग तपाईको अनुप्रयोग प्रकाशित र प्रमोट गर्न यो सजिलो बनाउनको लागि सिर्जना गरिएको हो, र मोबाइल बजारको लागि विशेष रूपमा तयार गरिएको छ।
कोडा एक सुरुचिपूर्ण र सुविधा सम्पन्न पत्रिका टेम्प्लेट एक सफा गृह पृष्ठ js स्क्रोलरको साथ हो, र अन्यथा पूर्ण रूपमा विजेटमा आधारित होम पृष्ठ डिजाइन। कस्टम स्टाईल गरिएको ट्विटर मोड्युलको साथ, एक "यो सेयर गर्नुहोस्" मोड्युल र "यो मनपर्दो" लोकप्रियतामा आधारित पोस्ट फिचर यस थिमले पक्कै पनि तपाईंलाई लुकाउनेछ।
एम्पोरियम, उत्तम ई-कमर्स विषयवस्तु अहिले सम्म सन्तुलित सुविधाहरूको साथ! WordPress मा सजिलै तपाईको अनलाइन स्टोर सिर्जना गर्नुहोस्।
यसले तपाईको WordPress स्थापनालाई पूर्ण कार्यात्मक ईकमर्स स्टोरमा परिवर्तन गर्दछ ब्याकएन्ड प्रशासनको साथ पूर्ण। तपाईको स्टोर सजिलैसँग ब्यवस्थापन गर्न प्रयोग गर्नुहोस् जुन मूर्त वा अमूर्त / डिजिटल सामानहरू बेच्छ।
गुडेग थिम, एक सफ्टवेयर वर्डप्रेस विषयवस्तु हो जुन पोर्टफोलियो वा व्यापार साइटको लागि उत्तम उपयुक्त हो। Background पृष्ठभूमि योजनाहरू, unique अद्वितीय पृष्ठ रूपरेखा, custom अनुकूलन विजेट, र विषयवस्तु पृष्ठमा अधिक अनुकूलन विकल्पको साथ आउनुहोस्, तपाईंको वेबसाइटलाई अधिक अनौंठो बनाउनुहोस्।
FolioStudio WordPress for.० को लागि निर्मित। यस WordPress विषयवस्तुले नयाँ अनुकूलन पोष्ट प्रकारहरू प्रयोग गर्दछ, तपाइँको साइटमा तपाइँको विशेष सेक्सनहरू अद्यावधिक गर्न यसलाई एक Cinch बनाउँदछ!
FolioStudio WordPress भलाइ को सही मिश्रण हो। एक परिष्कृत पोर्टफोलियोबाट, फोलियोस्टुडियोको साथ सबै चीजको अनुभव लिनुहोस्, व्यवसायिक व्यवसाय लेआउट सबै नयाँ डिजाइनको साथ लपेटिन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » वेब डिजाइन » WordPress » G० भव्य प्रीमियम WordPress थीम्स
राम्रो, तपाइँको साइट साझा को लागी धन्यवाद।
हेवनलाई जवाफ दिनुहोस्